RW khayre oo Xariga kajaray Xarunta CID oo la dayactiray – Radio Daljir
RW khayre oo Xariga kajaray Xarunta CID oo la dayactiray
Agoosto 19, 2018 6:30 b 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xarigga ka jaray xaruunta dembi baarista ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee CID,oo dib u dayactir lagu sameeyey.
Xarunta hoggaanka Baarista dembiyada ee CID ayaa lagu dayac diray barnaamijka isxilqaan oo ah mid lagu dhisayo xaruumaha Dowladda iskaa wax u qabso.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa kormeer ku sameeyey guud ahaan qeybaha ay ka koobantahay xarunta sida qaybaha ay yalaan qalabka lagu baaro Fal dembiyeedyada, kuwa lagu ogaado nuucyada qaraxyada oo casri ah iyo 6 Gaadiid ah oo cusub waa oo uu leeyahay hoggaanka CID.
Wasiirka Amniga Qaranka ee Xukumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar islow (Ducaale)ayaa tilmaamay in wasaaradda amniga ay wax lagu faano u tahay in ciidanka Booliska Soomaaliyeed ay noqdaan hormuudka barnamijka isxilqaan.
munaasabada kooban oo loogu mahadceliyey taliska Booliska Soomaaliyeed oo xarunta CID ku dayac tiray barnaamijka isxilqaan waxa ka qayb galay Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka , wasiiro uu ka mid yahay wasiirka Amniga , xildhibaano,guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo sarakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida,Taliyaasha Ciidanka Boliska iyo Asluubta,waxaana dhamana mas’uuliyiintii ka qeybgashey ay ku ammaaneen hoggaanka CID sida uu isugu xilqaamay dhismaha xaruntaasi.
Baashi Yuusuf Axmed Guddoomiyaha Maxakamadda sare ee Dalka ayaa dhankiisa booliska Soomaaliyed ugu hambalyeeyey dowrkooda dhismaha dalka,gaar ahaan dayactirka xaruuntan,wuxuuna xusay in dhismaha xaruntani ay ka qayb qaadanayso tayada hoggaanka CID oo tiir muhiim u ah garsoorka iyo Cadaaladda.
Hoggaanka baarista dembiyada oo ka mid ah hoggaanada ugu muhiimsan ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa isku xirta hay’addaha garsooorka , cadaadlladda iyo Nabad galyada,waana halka ay ka soo bilaabato barista dacwad ciqabeed kasta.
Booqashadda Ra’iisul Wasaare Kheyre ee CID ayaa timid xilli ay ku xiran yihiin Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo Musuq maasuq loo heysto.